Incwadana yeendaba No. 8 Autumn 2019-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Incwadana yeendaba No. 8 Autumn 2019
Incwadana yeendaba No. 8 Autumn 2019
Ndiyabulisa! Ekwindla, “ixesha leenkungu nokuchuma okuthobekileyo” sele lifikile. Siyathemba ukuba ubunehlobo elihle kwaye ukulungele ixesha elitsha elizayo. Nazi izinto zeendaba ezishushu kunye neziganeko zemfundo ezibandakanya ukukunceda usendleleni.
Sithanda ukubalaselisa izinto ezimbini ngokukodwa:
entsha, mfutshane, animated yokuzonwabisa malunga kutheni kungqinisiswa ubudala bokubukela iphonografi iyimfuneko; kwaye
ukukwazisa malunga ne-3 Royal College yethu abaSebenzi abaBanzi (RCGP) -ivunyiwe zocweyo kwimifanekiso engamanyala kwi-intanethi kunye nokungasebenzi ngokwesondo ngo-Okthobha nangoNovemba.
Kuzo zombini iimeko simema ngobubele ukuba usincede ekusasazeni ulwazi nge-Facebook, i-Twitter okanye nantoni na eminye imithombo yeendaba zasekuhlaleni okanye amajelo e-imeyile owasebenzisayo. Sijonge ngakumbi ukukhulisa ulwazi malunga nevidiyo. Ngale ndlela abazali banokuyibukela kwaye bayibonise abantwana babo, ootitshala banokwabelana ngayo kwaye baxoxe ngeziphumo ezinabafundi, ezempilo kunye nabasebenzi bezenhlalakahle banokwenza abasebenzisi beenkonzo zabo kunye nabaxumi baqonde izizathu zempilo nezokhuseleko lwabantwana zalo mthetho ubalulekileyo ucwangcisiweyo. ukulungiselela iinyanga ezizayo.
Kutheni kuqinisekiswa ubudala?
Iindibano zocweyo eziqinisekisiweyo zeRCGP
I-TRF yokuqalisa iziCwangciso zeZifundo zooTitshala, abaSebenzisi boLutsha njl.
Ingqungquthela yesithandathu yeZizwe eziManyeneyo malunga nokuziphatha gwenxa eJapan
Ibonisa njani ukuba iphonografi ifaka igalelo kutshintsho lwemozulu
Urhulumente wase-UK ubonelele ngengxowa mali eyi-30 yezigidi ukuze kukhuselwe amaxhoba okuphathwa gadalala kwabantwana kunye nokufumana umkhondo kuboni
Jonga isikhokelo sethu saBazali saMAHHALA esihlaziyiweyo kwi-Intanethi
Nantsi eyethu blog kunye nevidiyo yokubonisa konke.
Ezi ndibano zithandwayo zithandwayo, ezingabizi mali zinokuya neeYunithi zoPhuculo zoNgcali ezivunyiweyo yiKholeji yaseRoyal yaBaqeqeshi ngokuBanzi. Zenzeka eKillarney 25th Ngo-Okthobha, e-Edinburgh ngolwesiThathu 13th Ngo-Novemba, eGlasgow ngolwesi-15th EyeNkanga. Fumana malunga nomngcipheko wokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi ezingamanyala kulutsha nakubantu abadala kwimpilo, kwezomthetho nakwezentlalo. Ngolwazi oluthe kratya lwesiqulatho, amaxesha abekiweyo kunye namaxabiso abonayo Apha.
Emva kweminyaka eliqela yokuphuhliswa ngoncedo lwabafundisi-ntsapho, ootitshala ababambeleyo, umcebisi kwezemfundo, abazali kunye nabafundi, i-TRF izokwazisa uthotho lwezicwangciso zezifundo eziza kusetyenziswa ngootitshala nabasebenzi abancinci kwezi veki zizayo. Ziya kubandakanya izifundo ezisebenzisanayo nezihloko ezinje: Ukuthumela imiyalezo kunye nemiyalezo Imifanekiso engamanyala kunye nawe; kunye neTografi kwiTyala.
Ngelixa kugxilwe kootishala abaninzi bezesondo bekwimvume yokufundisa, kubalulekile, iingcali ezininzi ziyavuma ukuba oku akwanelanga konke konke ukunceda ukujongana neziphumo zengqondo tsunami yezixhobo zesondo ezilukhuni ezifumanekayo kubantwana namhlanje, ngakumbi kwinqanaba elinovakalelo. ukukhula kwezesondo. Imifanekiso engamanyala ivela ngokukhawuleza njengesiyobisi esikhobokisayo.
Ukuhlala u-smack bang, up-up-on-up-on-up-up-up-up-up-up-in-up-up-up-up-up in-future research kwi-Intanethi, i-TRF ihambile kwaye yahambisa amaphepha e-2 kwiNkomfa yeLizwe yeThoba yesiThoba sokuZiphatha e-Yokohama, eJapan ngoJuni kulo nyaka. Sikwaye kwiiseshoni eziphambili kuphando lwamva nje malunga ne-Intanethi, kwaye siza kubhala isishwankathelo sencwadi yokujongwa kwakhona kwentombazana kwiiveki ezizayo. Isinyanzeliso sokuziphatha ngokwesondo okunyanzelekileyo (CSBD), isifo esichaziweyo kuMbutho wezeMpilo weHlabathi kuhlaziyo lwayo kwakhona Ulwahlulo lwehlabathi lweZifo (i-ICD-11) kwaxoxwa kakuhle. Kuyanceda ukwazi ukuba ngaphezulu kwe-80% yabantu abafuna unyango lwe-CSBD banomcimbi onxulumene nokuziphatha gwenxa ngokwesini njengokuziphatha kunye namaqabane amaninzi okanye abathengisa ngesondo rhoqo.
I-porn yindibano enkulu. Umboneleli omnye usasaza i-110 yezigidi zeengcaciso zevidiyo ezingamanyala aphezulu ngosuku. Kuyacaca ukuba isebenzisa amandla amabi kakhulu. Jonga olu phononongo lutsha lubalulekileyo liqela laseFransi malunga nokuba zingakanani i-Intanethi zibonisa iphonografi kwi-CO2 ukukhutshwa nokutshintsha kwemozulu. I-porn igalelo le-0.2% yazo zonke izinto ezikhutshwayo zegesi eluhlaza. Yonke imitha yamanqanaba olwandle enyuka, i-porn iya kuba negalelo le-2 millimitha. Imifanekiso engamanyala ibangela umonakalo kuyo yonke iplanethi!
Ihlala ilibaleka ukuba lungakanani na umlutha kumabonwakude we-intanethi onegalelo kukonyuka okumangalisayo kokona ukuphathwa gadalala ngokwesini kwabantwana. Kulungile ukuba le mali yenziwe ukuba incedise kuthintelo kunye nokufundisa uluntu malunga nemingcipheko yokufikelela ngokulula kuzo zonke iintlobo zeentanethi ezingamanyala kwi-intanethi kunye nemingcipheko yokwanda. Jonga ibali elipheleleyo Apha.
Ubuninzi, iipatheni kunye neempembelelo ezizimeleyo zoTyhila. Ukusetyenziswa kwabafundi bePolish University Students: IsiCwangciso seSigqeba seCandelo (2019)
Isifundo esikhulu ePoland (n = 6,463) kubafundi besilisa nabasetyhini (i-median age 22) baxela amanqanaba aphezulu okuba likhoboka le-porn (15%), ukwanda kokusetyenziswa kwe-porn (ukunyamezelana), iimpawu zokurhoxa, kunye nezesondo kunye nobudlelwane iingxaki.
Iintlobo eziqhelekileyo ezizimeleyo ezibonakalayo ezibonakalayo zokusetyenziswa koonografi zibandakanya: imfuneko yokuvuselela ixesha elide (12.0%) kunye nesistim sezesondo (17.6%) ukufikelela kwi-orgasm, kunye nokunciphisa ukwaneliseka ngokwesondo (24.5%) ...
Isifundo esikhoyo sicebisa ukuba ukubonakaliswa kwangoko kunganxulunyaniswa nokuzikisa amandla okuvuselela ngokwesondo njengoko kubonisiwe kwimfuno yokuvuselela ixesha elide kunye nokukhuthaza ngakumbi ngokwesini okufuneka ukufikelela kwi-orgasm xa usitya izinto ezibonakalayo, kunye nokwehla ngokupheleleyo kolwaneliseko ngokwesondo....
Iinguqu ezahlukeneyo zepatheni yokusebenzisa iphonografi eyenzeka ngexesha lokuchazwa kwabikwa: ukutshintshela kuhlobo lwenoveli lwezinto ezibonakalayo (i-46.0%), ukusetyenziswa kwezinto ezingahambelani nokuzibandakanya ngokwesondo (i-60.9%) kwaye kufuneka zisebenzise ngaphezulu izinto ezigqithisileyo (ezinobundlobongela) (32.0%).
Jonga ukuvuselelwa kwethu Isikhokelo sabazali samahhala kwi-intanethi ye-intanethi
I-Copyright © 2019 I-Foundation Foundation, Wonke amalungelo agcinwe.